Bell Sanchar अमेरिकामा भएका आर्थिक कारोबारमा किन मुछिएको छ नेपाली सेना ? - Bell Sanchar
अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले गरेका करोडौं रकमका आर्थिक कारोवारमा नेपाली सेनासमेत मुछिएका विवरणहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजानिक भएका छन्। संसदको सार्वजानिक लेखा समितिले अमेरिकामा किनिएको ७८ लाख अमेरिकी डलरको घर प्रकरणको छानविनका क्रममा पनि नेपाली सेनाका जर्नेल मधुकरसिंह कार्की संलग्न भएको पाइएका छन्।
न्यूयोर्कमा कार्यरत नेपाली मूलका वकिल खगेन्द्र जिसीसँगको मिलेमतोमा भएको सो प्रकरण सार्वजानिक भए पनि नेपाली सेनाले त्यसलाई थाहा नपाएजस्तो गरिरहेको छ। प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा स्वयं बंगलादेशमा सैनिक सहचरी भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। सैनिक सहचरीले के गर्न मिल्छ के मिल्दैन भन्ने राम्रो जानकारी राख्ने उनी आफ्नै मातहतको जर्नेलले त्यत्रो घोटालामा सहभागिता जनाउँदा मौन बस्नुले अमेरिकामा भएका घोषणामा सैनिक नेतृत्वको नियतमाथि पनि शंका उठ्न थालेको छ।
यो टेन्डरमार्फत प्रतिष्पर्धाका आधारमा घर खरिद गर्ने योजना थियो। तर, २०७५ को बैशाखमा आइपुग्दा यो प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियालाई यत्तिकै बीचैमा छोडियो। अगाडि बढिसकेको पुरानो प्रक्रियालाई बीचमै अलपत्र पारेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरियो। नयाँ सुरु गरिएको प्रक्रिया कानुन विपरित थियो । पुरानो प्रक्रिया अलपत्र पारेर २०७५ को बैशाखमा भवन खरिद गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरियो । यो नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय थियो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको २ दिनमै नियमविपरित एउटा अमुक समिति गठन गरियो जसको संयोजक जर्नेल कार्कीलाई बनाइयो । सैनिक सहचरीलाई यस्तो जिम्मेवारी दिनु नै नियम विपरित हो।
तर, यी प्रकरणहरु सार्वजानिक हुँदा सैनिक नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसेको छ। आखिर कुन तत्वले यी प्रकरणहरुमा छानविन हुनबाट सैनिक नेतृत्वलाई रोकेको छ? आम नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सेना भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदै गएको प्रकरणले दुखी बनाएको छ र यसको जवाफ सेनाले जनतालाई दिनु जरुरी छ। ढाकछोप कहिलेसम्म सम्भव छ प्रधानसेनापतिज्यू?dc nepal